Namuhla kumelwe sikuqonde lapho ukwenza Diaskintest Petersburg. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqonda zonke izici le nqubo. Ngempela, eRussia like uhlola empeleni esasisesisha, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi ngakho. Ngokulandelayo, uzofunda zonke izici Diaskintest. Kuyini lokhu? Lapho futhi yenziwa kanjani? Yiziphi Izimo futhi kungaba nemiphumela? Lapho Petersburg sipho ukusebenzisa le ndlela ukuxilongwa? Okushiwo ngabantu mayelana nenqubo wathi? Qonda yonke lena akuyona ngempela kunzima kangaka. Ikakhulukazi uma ngokucophelela ibheka konke ulwazi olufanele mayelana Diaskintest. Kuphela ngale ndlela 100% baqonde bona noma cha makudle inqubo enjalo.
Bayanda izakhamuzi asuke ezibuza, lapho wenze Diaskintest. Petersburg, noma imuphi omunye umuzi - ke akubalulekile kangako. Into esemqoka ukuthi umphakathi isibe indlela uphethwe. Ngakho, kuyasiza. Kodwa kungani? Kuyini konke inqubo enjalo?
Diaskintest - lutho kodwa indlela yesimanje ukuxilongwa TB. Analogue Mantoux test, okuyinto kubhekwa esingaphansi yingozi. ERussia, inqubo isibe kancane kancane esikhundleni izindlela endala ekuxilongweni kwe-TB ezinganeni.
Ngakho, Diaskintest ikakhulu isicelo engamahlongandlebe. Wabamba kokubili ezikhokhelwayo khulula. Kodwa lapho ncamashi? Yini Bonke Abazali Okufanele Bakwazi mayelana nenqubo phambi uyavumelana na?
Njengoba ezothatha isikhundla Mantoux
Ivelaphi Diaskintest Petersburg? Mantoux test eRussia senziwe zonke izibhedlela yezwe. Futhi imali, futhi mahhala. Futhi lokho Singathini indlela entsha ekuxilongweni kwe-TB?
Ngaphambi unentshisekelo izikhungo ezithile, ucwaningo ngaphansi cwaningo, kubalulekile ukuqonda ngokuphelele kanjani futhi nini, futhi kwaba namuphi imiphumela kanye contraindications labetibambile Diaskintest.
Ukuze isiguli, kunemidanti azihlukile kakhulu kusukela test Mantoux. Isiteshi ingane ngakwesokunene phakathi isihlakala kanye endololwaneni is ufake reagent ekhethekile. Ngaphezu kwakho konke, namaprotheni ukuthi aphendule TB. Lokhu - umehluko oyinhloko ngaphansi kongqimba. Umgomo iqondiswa phansi kwesikhumba, ngaphandle kokuthola lingene egazini. Futhi kuyamjabulisa abazali abaningi abakhetha awufisi ukungena isidumbu sengane ezihlukahlukene izidakamizwa.
It asikafiki kunqunywa ncamashi endaweni lapho Diaskintest ukwenza Petersburg. Ukuxilongwa sofuba - kuyinto inqubo ebalulekile. It wenziwa kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Indlela entsha yokunquma isifo has eziningi eziwusizo. Kuyini lokhu?
Abakhiqizi yokugoma, kanye nezinye izakhamuzi uthi ezicini ezinhle elandelayo Diaskintest:
ongama, kunokuba ekuphathweni emthanjeni noma esicutshini;
Lokho kwenza ukunquma ukuphumelela ukwelashwa isifo sofuba.
Futhi uzinake ukuthi zokwelashwa ziyatholakala. Thola indawo ukwenza Diaskintest Petersburg, akunzima. Kukangaki edingekayo ukuze afeze kulolu cwaningo? Futhi yini okunye okumele uziqaphele izakhamuzi inqubo?
Kuye kuthiwe ukuthi Diaskintest - a esikhundleni Mantoux test. Kodwa-ke, akucacile kangaki yalolu cwaningo liyadingeka ukuze afeze. Iziphi izimiso zikhona mayelana nale ndaba?
Kungakuhle Diaskintest aphethwe njalo ezinyangeni ezingu-12. Ngendlela efanayo njengoba test Mantoux. Ngokokuqala ngqá ingane ungenza ukuhlolwa ezifana ekuseni njengoba unyaka 1. Ngonyaka ozayo kuzodingeka libuyele ngenqubo.
izifundo okuphindaphindayo ngezinye izikhathi futhi ebekiwe, kodwa abanye iziphazamiso. Izinkomba ubuciko ziyefana esimweni e Mantoux ukuphendula. Ngaphezu kwakho konke, njengoba yokugoma zokugcina angadluleli esingaphansi 1 inyanga.
Abantu abaningi bayazibuza, lapho wenze Diaskintest Petersburg. Ngaphambi ubhalisele inqubo, kufanele sinake yokuthi ke anezinye Izimo. Umphumela walokhu uyoba olungalungile uma ungenawo nemithetho kanye nezincomo. Futhi, uma kukhona Izimo kungukuthi ayifakiwe imiphumela engemihle.
Sigweme Diaskintest edingekayo uma:
hhayi ngaphezu kwenyanga kusukela lokugoma zokugcina noma ukugula;
kukhona hypersensitive ukuba izingxenye umgomo;
kukhona izifo zesikhumba;
ingane uthambekela komzimba;
Isifo sokuwa kwenzeka;
babe izifo oyingozi noma ezingamahlalakhona ezithathelwanayo ngo izingane.
Ngakho, ukuhlolwa okudingekayo kuphela banezingane eziphile kahle. Enye kunganikezwa. Isici ehlukile futhi yokuthi Diaskintest engenziwa kanye ukusabela nesiphuku. Vele imijovo zenziwa ezandleni ezahlukene.
Ivelaphi Diaskintest Petersburg? Ukuxilongwa nesifo esibizwa ngokuthi isifo sofuba - inqubo ebalulekile yonyaka. Ngakho-ke, abazali banesithakazelo kulokho izindawo nasemitholampilo Ungasebenzisa indlela entsha ekutholeni khona izifo kule isidumbu sengane.
akufanele ukusheshe "lokugoma". Ngaphambi kunconywa ukuze ubone uhlu amathuba okuba nemiphumela engemihle, ekufanele ingane ungathola. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umzali ngamunye esihlangana naye lungaba ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo zokuhlola.
umakhi Vaccine liyasiqinisekisa ukuthi akukho abalulekile side effects Diaksintest cha. Kodwa lezi zenzakalo kungabonakala nasemkhakheni eziningi:
ukusabela okunjalo akufanele ukwethusa noma ukwesaba. Imiphumela kuyinsakavukela wekuphatsa amaprotheni emzimbeni womuntu. Kudokotela kutuswa zisebenza kuphela uma kwenzeka ziwohloke ezibucayi impilo yengane. Ngokwesibonelo, e aphakeme kakhulu okushisa.
Abazali abaningi uyazibuza lapho ukwenza Diaskintest Petersburg, futhi isicelo salo eRussia - futhi impikiswano ebalulekile. Kuyaphawuleka ukuthi ukunakekelwa okukhethekile ikhokhelwa kuzici ezifana amaphuzu Imiphumela oluvelele.
Ngemva ukwethulwa amaprotheni Kwakube sekudingeka alinde amahora 72. umphumela kuphela esimweni esithile kuyoba ngokunembe ngangokunokwenzeka. Ekuhloleni usuku ngaphambili noma kamuva ngenxa ngeke kuthathwe ngokuthi idatha etholwe 100%.
Indlela ahumushe imiphumela Diaskintest? Kahle kahle, ngokungabi bikho sofuba endaweni umjovo akukho impendulo. Ngezinye izikhathi kuba iminonjana kufakwe yenaliti. Kungase kube ububomvu kancane eduze site kokuphathwa umgomo. Ezimweni ezingavamile kwakheka ilimaze. Kodwa hhayi ngaphezulu kuka-2 kwangu. Ungethuki uma isayithi umjovo uvele uphawu kungekho nto enemibala emihle abafika kwabangu-10 kwangu ububanzi. Lokhu kubuye okungokwemvelo, isakhamuzi siyimiqemane.
Lapho igciwane le-TB sizoba izenzakalo ezithile. Ngaphezu kwakho konke, endaweni lomjovo yakha indawo enkulu ebomvu noma pink. Futhi, kungase kube papules ezinobukhulu obuhlukahlukene. Lokhu kusho ukuthi umzimba has sofuba.
Ngezinye izikhathi, ngenxa yesizathu esithile kukhona yi okungamanga Diaskintest. Kodwa lokhu iyisici abavamile. Kulokhu, kutuswa ukuphinda isivivinyo ngemuva kwesikhathi esithile. Ukuze ngakususi Imiphumela zamanga-HIV, njengoba umthetho, abantu bamembathisa ingubo ecwebezelayo, futhi Diaskintest esifanayo, kodwa, njengoba kuye kwashiwo, ezandleni ezahlukene. Akukho nzima noma ekhethekile.
Kusukela kuyaqondakala ukuthi empeleni limelela Diaskintest. Lapho ukwenza Petersburg ke ngenkokhelo noma mahhala? Le ndlela izochazwa kamuva. Kodwa ekuqaleni le izakhamizi kudingeka sazi ukuthi singaphila kanjani banakekele indawo umjovo. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi umphumela kwenzakala njengoba ulwazi ngangokunokwenzeka.
Kunezindlela eziningana enqabela, okuzodingeka ukuthobela. Lwemithetho emva yokugoma nge Diaskintest?
Kuze kube manje, akunakwenzeka:
ukunwaya indawo umjovo;
seal endaweni lapho kuhlangana khona inaliti ifakwe, usimende noma ngebhandeshi ngebhandeshi;
umjovo indawo ukufezekisa iyiphi okhilimu amakha namafutha;
isetshenziswa endaweni kwezimonyo namakha.
Uwacwilise ingalo yakhe e ukuxilongwa yesimanje ye-TB kungaba. Lokhu kuyinzuzo enkulu phezu Mantoux ukuphendula. Ikakhulukazi uma kuziwa ofeza test ezinganeni.
Kusobala ukuthi le mibono Diaskintest. Lapho ukwenza Petersburg mahhala noma kuye? Uma emva zonke lezi zindlela osekukhulunywe, kwanqunywa ukuba baphendukela isikhungo sokwelapha i-uphethwe, kubalulekile ukuba ngokucophelela ukukhetha inhlangano ezosiza ukunquma ukuthi umuntu TB ngokusebenzisa Diaskintest.
Empeleni ubeka kakhulu. Futhi kuyo yonke imizi, akusho ukuthi Petersburg. Kodwa lapho ukwenza Diaskintest Petersburg? Kuze kube manje, kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane wenziwa:
e zasenkulisa esikoleni izinhlangano;
e zikahulumeni isabelomali impilo;
Ngakho, abazali lezingane zesikole futhi izingane zasenkulisa ababa khona izinkulisa, njengoba umthetho, kungadingeki ukuba bathole indawo yokuhlola. Ngosuku oluthile nje ngokwanele ukunikeza imvume yayo Diaskintest. Futhi ngqo esikoleni / inqubo zasenkulisa wafunda wenziwa. Umthetho osebenza ku zonke izikhungo lapho ekuleso sifunda. Phela, njengoba kuye kwashiwo, Mantoux ingena esikhundleni Diaskintest.
Lapho ukwenza Petersburg ukutadisha izinqubo abadala kanye nezingane ezinabazali belahla "lokugoma" ezikoleni / izingadi? Kulula kakhulu: ngokwanele ukusebenzisa emtholampilo noma endaweni yokuhlala wengane, noma inhlangano yezokwelapha yangasese. Lapho, ngo-mahhala noma zikhokhelwe kuyobe kusekelwephi Diaskintest. nezinkinga abantu abakhetha imithi ikhokhwe - hhayi umtholampilo zonke zezingane namuhla Petersburg olwenziwa ucwaningo ngaphansi cwaningo.
Lapho ungenza Diaskintest Petersburg? Mahhala, njengoba umthetho, ungaxhumana zinhlangano:
dispensaries TB (noma igatsha);
imitholampilo ezisemadolobheni uhlobo tuberculous;
Isibhedlela Ioanna Kronshtadskogo Wezingane;
ezithathelwanayo esibhedlela sezingane izifo;
Petersburg Research Institute Phthisiopulmonology.
Ngakho, izakhamuzi mahhala ngaphandle nobunzima ukuxhumana nezikhungo efakwe futhi ukuxilonga sofuba. Futhi bayamenywa ukuba beze kudokotela ngesicelo emtholampilo, ehambisana elilodwa noma kwenye umhlali Petersburg. zikhungo futhi enze Diaskintest. Angaphansi kwemithetho kanye nezingane kanye nabantu abadala esikhungweni.
Eyase ecacile lapho ukwenza Diaskintest Petersburg. Izibuyekezo zibonisa ukuthi abazali kwabancane bavame ukutusa ukuya emitholampilo yangasese nganoma yisiphi ngokugoma. A kuya-TB Dispensary labantu enempilo kuyinto uvalo othile.
Njengoba kuye kwashiwo, ukuthola umtholampilo yangasese, lapho kuhambisana cwaningo ngenhla, kodwa ngisho simple. Ngenhlanhla, Diaskintest uthenge ezizimele yezokwelapha njengemiphumela nokuningi. Lokhu kusho ukuthi maduze ukuthola indawo lapho ukwenza Diaskintest Petersburg, ngeke kube nzima.
Shaja angafeza ucwaningo ku emtholampilo, "EMC". Ukuze uthole olunye ulwazi, kutuswa ukucacisa ngamunye sezempilo lomuntu yangasese. Phela, uma ubuza izakhamuzi, lapho wenze Diaskintest Petersburg, impendulo livela ukudedelwa umsebenzisi Inthanethi "ku-TB emtholampilo noma socwaningo". Ngamanye amazwi, abantu kungukuthi kakhulu wasakazeka okuyinto izinhlangano yezokwelapha yangasese baqhuba isivivinyo lafundvwako e abadala kanye nezingane.
Isifingqo kanye Iziphetho
Yiziphi iziphetho kungenziwa sisuselwa ngenhla? Manje kusobala, lapho wenze Diaskintest Petersburg. Kungashiwo kwenziwa umtholampilo yangasese ezifana kulolu cwaningo? Yebo, kodwa kuyodingeka isebenze ukuzama ukuthola inhlangano wathenga umgomo.
Okumele kuqashelwe yokuthi inqubo ongesiwo umgomo. Kuyinto shot abavamile. Akenzi ngegciwane emzimbeni amaseli TB. Lokhu kusho ukuthi inqubo ukuxilongwa ephephile lesi sifo.
Nokho, abanye abazali namanje senqabe ukwenza inqubo enjalo. Diaskintest uma oyifunayo, kungenziwa esikhundleni Mantoux ukuphendula, kanye TB-spot. Kufanele kuqashelwe ukuthi indlela endala ekuxilongweni kwe-TB ozama ukubeka eceleni kulo lonke elaseRussia.
Izibuyekezo amaqabunga inqubo zihlukile. Abanye abazali bathi ngezinye izikhathi Diaskintest uyawenza amaphutha. Kodwa, njengoba kuye kwashiwo, sonke sibhekana kusukela kulesi simo. Into esemqoka ukuthi isivivinyo kusiza ngempela izakhamizi ukuthola sofuba amaseli ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi sokulondeka seqophelo eliphezulu.
Ingxenye abazali bathi izingane eziningi ku Diaskintest sintula yimuphi ukuphendula nomzimba, nakuba eseneminyaka Mantoux. Ngakho-ke uyiswa usiqinisekisa umjovo ephephile futhi izindlela zokuxilonga bebonke. Kukhona futhi labo are skeptical emisha ezinjalo. Kubantu abanjalo, njengoba kuye kwashiwo, siye beveza ukuhlolwa igazi TB-spot. Ushintsha Diaskintest, kodwa kuphela inani elilinganiselwe imitholampilo sihlinzeke izinhlelo ezinjalo.
Ukwahlukanisa isakhi sofuzo - kwesakhiwo obusebenzayo
Ukwelashwa ukukhwehlela in abadala nezingane
Yenhlwathi a umuvi, yini okufanele uyenze?
Ukususa warts. Izindlela yokususa warts
Kanjani ukugxilisa apula ekwindla: izincomo kanye indlela
Ukuhambelana: besilisa + owesifazane Gemini-Taurus
Monochrome Nails: imibono Manicure, iseluleko
Ibhishi sigqoka futhi amabhantshi.
Uju lwehlathi luwumkhiqizo okhululekile. Izakhiwo eziwusizo nesicelo
Abalingisi "Saving Mr. Amabhange", abahlanganyeli kanye amatilosi ifilimu